Ecorelos • Khabiiro ku habboon Eco-saaxiibtinimo
Dukaan caalami ah oo bilaash ah ayaa lagu soo diraa dhammaan amarada
Dhammaan alaabada ragga
BOBO BIRD Premium Watch Automatic Mechanical Watch
€349.84 €174.93 fursadaha Select
Mudanayaal Ilaaliyey, Saacadaha Ragga
BOBO BIRD Ilaalinta Qoryaha ee Minimalist Minimalist Modern
€86.26 €69.00 fursadaha Select
BOBO BIRD Raga Qormo Retro & ahama Chronograph Birta ahama
€119.05 €65.47 fursadaha Select
Dhammaan alaabada dumarka
BOBO BIRD Raaxada Haweenka Chronograph Quartz Watch
€72.96 – €74.95 fursadaha Select
BOBO BIRD 4 Saacadaha Hablaha ah ee Quartz Mudanayaal Watch
€99.92 €69.94 fursadaha Select
BOBO BIRD Mudanayaal Xiiso Leh oo Daawanaya Xarig Xarig
€95.75 €52.64 fursadaha Select
Ku arag qiimayaasha lacag ka duwan adigoo dooranaya xulasho hoose:
Ku keydi 10% dheeraad ah dhammaan alaabooyinka leh sumadda "COVID19"
Illaa 70% ka baxsan
Ha ku seegin waxyaabo aad u khaas ah oo ah at aan caadi ahayn qiimaha iibka. Waqti xaddidan oo keliya!
Soo qaado gorgortan →
Looma baahna lambar sir ah
Alaabooyinkeenii ugu dambeeyay
BOBO BIRD Khadka Cas ee Bamboo Casaanka ah oo Lagu Dheelo Qalabka Nylon
€44.96 €42.70 Ku dar gaadhigii
BOBO BIRD Raaxo Ragga Madoow & Casaan Fagaaraha Loox Eeg
€55.42 – €65.98 fursadaha Select
BOBO BIRD Mudanayaal Bamboo & Eedo aan Xaar lahayn oo Daawasho leh Xarig Harag ah
€99.92 €54.97 Ku dar gaadhigii
BOBO BIRD Mudanayaal Square Casual Wooden Bracelet Woodless Watch
€119.93 €56.37 fursadaha Select
BOBO BIRD Maalinta Jacaylka & Taariikhda Soo Bandhig Labada Lamaane Alwaax
€60.10 – €119.15 fursadaha Select
BOBO BIRD Waqtiga Labaad ee Waqtiga Sugida ee Dharka
€124.93 €81.19 fursadaha Select
SHIFENMEI Analogga Iskujira Ragga iyo Ilaalinta Qoryaha Dijital ah
€64.48 – €75.95 fursadaha Select
Fiiri dhammaan alaabooyinka →
Daabal casri ah oo muuqaal ah oo muuqaal ah oo muuqaal ah ayaa ku siinaya daawashadaan unisex taabashada shaqsiyeed. Waxaa lagu heli karaa xulasho maqaar ama silsilad bir aan xirnayn
Waxaan aaminsanahay helitaanka fudud ee agabyada dabiiciga ah ee saaxiibtinimada leh taasoo kaa dhigeysa inaad fiicnaan dareento oo aad u muuqato qof weyn. Iyada oo si taxaddar leh loo xushay, taageero heer sare ah iyo habka lacag-bixinta oo ammaan ah waxaad ku jirtaa gacmo wanaagsan.
Daraasiin naqshado caqli badan leh, qaabab iyo fikrado aad kala dooran karto, waxaad ka heli doontaa waxaad ka raadineyso dukaankeenna.
Taageero aan caadi ahayn
Taageerada macmiilkeennu waa midda labaad - ciddii adeegsataana way ku dhiirran tahay sida aynaan u nasanayn illaa ay arrin kasta laga xalliyo qanacsanaantooda.
Ammaan bixi hubso
Marka loo eego 256-bit TLS amniga iyo xirnaanshaha AES ee horumarsan waxaa lagu damaanad qaadayaa in iibsiyadaadu ay amaan yihiin.
Hadalka dhabta ah ee macaamiisha dhabta ah
Macaamiisheena daacadda ah kaliya ma soo laabtaan, oo si fudud naguma ay taliyaan, waxay ku adkaysanayaan in saaxiibadooduna sidoo kale naga iibsadaan!
Kaliya kuguma talin karo Ecorelos ku filan. Qof kastaa wuu jecel yahay saacaddayda cusub oo wuxuu i weydiiyaa meesha aan ka helay, aniguna had iyo jeer waan u sheegaa! Cabashadayda kaliya ayaa ah inaan go'aan ka gaari karin waxa xiga ee aan kaa iibsanayo!
Ku meelaynta amaradeenna Ecorelos way fududahay mana rumaysan karno inaan helnay saacado tayo wanaagsan leh qiime intaas la eg! Waxaan ku dhawaannay inaan wax ka iibsano meelo kale laakiin waan ku faraxsanahay inaanan sameyn, maadaama aan jecel nahay inaad sidoo kale taageerto sababaha deegaanka. Waxaan ku soo laaban doonnaa adeegsiga lambarkayaga dhimista!
Alaabadayada ugu caansan
BOBO BIRD Ilaalada Lamaanaha & Cork Lamaanaha is jecel
€44.96 €42.70 fursadaha Select
Noocyada aan keydinay
Waxaan doorana kuwa ugu fiican si laguugu xaqiijiyo tayada. Ma jiri karto tanaasul markii ay timaaddo alaabada, fududeynta xirnaashaha iyo cimri dheellitirka.
Gaadiidka Dunida ee bilaashka ah
Dhamaan amarada - qarash gareeya ugu yaraan
60 Maalmood Iibiye Iibiye
Dammaanad soo celinta buuxda
Gargaarka Caalamiga ah
Waxaa lagu soo bandhigay dalka adeegsiga
100% Hubinta Amniga ah
Isku qor warsideheena si aad u hesho dalabyada ugu dambeeyay!